Midowga Yurub oo shaaca ka qaaday 2 qorshe oo uu ugu tala galay Somalia | Salaan Media
Midowga Yurub oo shaaca ka qaaday 2 qorshe oo uu ugu tala galay Somalia
Muqdisho (SM) Midowga Yurub, ayaa sheegay inay wadayaan dadaalada ku aadan ka shaqeynta nabada dalka Soomaaliya, si loosii wado howlgalka ka dhanka ah kooxaha burcad badeeda Soomaalida.
“Waxaan dooneynaa in aan sii wadno ka hotaga kooxaha burcad badeda ilaa xaalada ay ka hagaayeyso, la iskuna haleyn karo dhulka biyaha Soomaaliya”sidaasi waxaa yiri sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub kadib shir jaraa’id ee uu qabtay.
Nick Westcott, oo ah madaxa adeegyada dibada ee midowga Yurub ayaa sheegay in la dagaalanka kooxa burcad badeeda ay sii wadi doonaan, laakiin wuxuu xusay in midowga yurub in badan uu ka shaqeynayay arimaha Soomaaliya, isagoo xusay in ujeedadooda ay tahay in dowlada ay xaqiijiso amaanka kala iyo dambeynta Soomaaliya.
War dhawaan lasoo saaray ayaa lagu sheegay in hoos u dhacii ugu darnaa uu ku yimid weeraradii ay geysan jireen kooxaha burcad badeeda Soomalida.
Nick Westcott, ayaa dhanka kale sheegay in ujeedooyinka midowga Yurub ay tahay in hishiis uu la galo hayaha caalamiga, isaga oo dhanka kalana sheegay in shir lagu casuumay madaxda Soomaaliya uu ka dhici xarunta midowga yurub bisha September.
Wuxuu sharaxaad ka bixi hishiiska cusub ee loogu magac daray New Deal, isaga oo sheegay inuu yahay qorshe dowlada Soomaaliya u suurto gelinayo inay xooga saarto dib u hanaqaadida dowlada ka dhalata dalka, hayadaha caalamka ay ku taageerayaan muhiimadaaasi, laguna dhexdhexaadinayo Soomaalida.